တွေးဆမှုများနှင့် ကျင့်ဝတ် - Yangon Nation News
တွေးဆမူသည် လက်တွေ့ကျသည့် နိုင်ငံရေးမဟုတ်သလို အယူအဆ၊မူဝါဒလည်းမမည်ပါ။
မည်သည့် အကြောင်းအရာကိုဘဲ ဖြစ်စေ…..
အစရှိပြီး အဆုံးသတ်မူလည်းရှိ နိုင်သလို…..
ထိုသည်က တွေးဆ သူတစ်ဦးချင်းနဲ့သာ
တွေးဆမူသည် လူ့အခွင့်အရေး မဟုတ်သလို
နိုင်ငံသား အခွင့်အရေးလည်း မဟုတ်ပါ။
သို့ပေမယ်လို့ တွေးဆမူကို အများပြည်သူဆီသို့ ဖွင့်ဟ ၊ချ ပြ ၊ပြောဆို၊ရေးသား တဲ့အခါမှာ စည်းရှိဖို့တော့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
ယဉ်ကျေး၊ ပျူ ငှာ စွမ်းရှိစေဘို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။
၈၈ မျိုးဆက်ဆိုတာ ပုဂ္ဂလပိုင် မဟုတ်သလို
ဦးနေဝင်းဦးဆောင်ကာ ပြည်ထောင်စုမြန်မာ နိုင်ငံကို အုပ်ချုပ်နေသည့် မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်
ဆန့်ကျင်… တွန်းလှန်… ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဝင် တော်လှန်ခဲ့သည့် လူထု အရေးတော်ပုံကြီးဖြစ်ပါတယ်။
(၈၈၈၈)လူထုအရေးတော်ပုံ အုံကြွမူ၏ အောင်မြင်သော ထူးခြားချက်က မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ၏ ပါတီတွင်း၊ပါတီပြင်ပမှာရှိနေ သည့် တစ်ပါတီ အာဏာရှင်စနစ်ကြီးတစ်ခုကို
ချုပ်ငြိမ်းစေပြီး ပါတီစုံရွေးကောက်ပွဲ ဆီကို တက်ရောက် လှမ်းနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ထိုမှ… ၈၈… မျိုးဆက်ဟူ၍ မြန်မာ့ နိုင်ငံရေးအသစ်အုပ်စုကြီးတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။
နားစည်မှတစ်ဆင့် အသံလိူင်းများရိုက်ခိုက်မူ ဖြင့် အသံများကို ကြားနေရသလိုမျိုး…
မိမိတို့နိုင်ငံအတွင်း ဆင့်ကဲ… ဆင့်ကဲ ဖြင့်…
နိုင်ငံသားတစ်ဦးခြင်း၏ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေး ဟူသော နိုင်ငံရေးမျက်နှာစာအသစ် ဆီကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအများစုက လက်ခံကျင့်သုံးနေ ကြသော ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ ရွေးကောက်ပွဲ ယဉ်ကျေးမူတစ်ခု ဖြစ်ပေါ် ခံစားခွင့်နဲ့အတူ ပြည်သူ တစ်ဦးချင်းက မိမိစိတ်တိုင်းကျ နှစ်သက်သော နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုကို ရွေးချယ်
ဆန္ဒမဲ ပေးပိုင်ခွင့်ကို လက်ဝယ် ပိုင်ဆိုင်နိုင်မူ တွေရှိလာပါပြီ။
နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုခြင်း၏ တာဝန်မှာ မိမိပါတီမှချမှတ်ထားသည့် မူဝါဒ များကို ဆန္ဒမဲပေးကြမည့် နိုင်ငံသား တစ်ဦးခြင်းမှသည် အားလုံးကို ချ ပြစည်းရုံးကြရသည့် အခွင့် အလန်းများသည်လည်း မိမိတိဲုနိုင်ငံမှာ အခြေ ချ နိုင်ခွင့် ကိုယ်စီလည်းရရှိနေကြပါပြီ။
ထိုအရာများသည်ကား ၈၈၈၈ ၏ အသီးအပွင့်များဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အပြင် ၈၈၈၈ မှတစ်ဆင့်…..
ယခုအချိန်မှာ နိုင်ငံရေးပါတီများထူထောင်နိုင်သည့် အခွင့် အလန်းများဖြစ်လာခဲ့ကာ…
တူရာ… တူရာ စုလာကြပါတယ်။
၎င်း တူရာ… တူရာ စုကြသူများမှ နိုင်ငံရေးပါတီထူထောင်ကြသူတွေ ပေါ်လာကြကာ…
မိမိနှစ်သက်သည့် နိုင်ငံရေးပါတီကို ဝင်ကြတဲ့ကြသူတွေ၊ လူမူ စီးပွား နယ်ပယ်အသီးသီးသို့ စသည်ဖြစ် တစ်ဦးခြင်း၏ ဆန္ဒ၊ လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ် ရပ်တည်ပိုင်ခွင့်နဲ့အတူ
ကိုယ်ပိုင် အခွင့် အရေးများဖြင့် မိမိနှစ်သက်ရာ ကဏ္ဍ များနဲ့ နယ်ပယ်များဆီသို့ သွားနေကြပါပြီ၊
သို့မို့… မိမိတို့ တစ်ဦးခြင်းမှ သည် အားလုံးက နားလည် လက်ခံပေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးခြင်းသည် မိမိဝင်ရောက်ဆောင်ရွက်သည့် အဖွဲ့အစည်း၊ နိုင်ငံရေးပါတီမှ ချ မှတ်ထားသော မူဝါဒ ၊များကို သတ်မှတ်ထားသည့် အဖွဲ့ ၏ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများနှင့်အညီ ထိရောက်စွာ သွားရမည့် စွမ်းဆောင်၊ အခြေပြု သွားနေကြပါပြီ။
ဆိုလိုတာက ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ်လုပ်ကြဘို့ လိုအပ်ပြီး အခြားသူ တစ်ဦးခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခြင်းကို ဆော်ကား… ရိုင်းပျ မူမပြုမူစေဘို့၊မပြောဆို မရေးသားကြဖို့လိုပါတယ်။
ဤသည်က လိုက်နာရမည့် ကျင့်ဝတ်ဖြစ်ပါတယ်။
ယခုကာလမှာ (၂၀၂၀) အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို ဝင်ရောက် အရွေးချယ်ခံကြဖို့ နိုင်ငံရေးပါတီများ အားလုံးနီးပါးက ပြင်ဆင်နေကြတာကိုတွေ့နေရပါတယ်။
နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုထူထောင်ကြပြီဆိုပါက အရင်ဦးဆုံးလုပ်ရတာက တူရာ.. တူရာ ကိုစု ကြရပါတယ်၊ ထိုမှတစ်ဆင့် ပါတီဝင်လိုသူများပြားလာစေရန် လူသူ အများကို စည်းရုံးရပါတယ်။
အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွေကိုလည်း ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင် အရွေးချယ်ခံရစေဖို့ ပြည်သူများအား ချပြစည်းရုံး စွမ်းဆောင်ရပါမယ်။
ယှဉ်ပြိုင်သည့် နေရာ ဒေသမှာ မိမိနဲ့ ယှဉ်ပြိုင် ရွေးချယ်ခံမည့် ပါတီ၏ အားနည်းချက်များကို ထောက်ပြ ပြောဆိုပြီး မိမိပါတီ၏ မူဝါဒများကို မဲဆန္ဒရှင် ပြည်သူများကို ချ ပြပြောဆို စည်းရုံးရပါမယ်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ထိခိုက် ပြောဆိူမူကို တတ်နိုင်သမျှ ရှောင်ကြဖို့လည်းလိုပါတယ်။
မိမိပါတီ၏ အားသာချက်များရှိပါကလည်း မဲပေးမည့် ပြည်သူများကို ဖွင့်ဟ ပြောဆို စည်းရုံးနိုင်ရပါမယ်။
အခုပြောနေ ရေးတင်နေကြတဲ့ ၈၈ မျိုးဆက်ညီညွတ်ရေးဆိုသည့် စိတ်ကူးယဉ်ဆန်နေမူကို လျော့ချ ကြရပါမယ်။
အထက်မှာ အပိုဒ်အစမှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
၈၈ မျိုးဆက်ဆိုတာ ၈၈၈၈ အရေးတော်ပုံ ကြီးမှာပါဝင်ခဲ့ကြသော…..
ကျောင်းသား၊လူထု လူတန်းစားအားလုံး၊ ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများ ၈၈၈၈ အရေးတော်ပုံကြီးမှ အစပြုခဲ့ကြသူဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ အလယ်မှပါဝင်လာသူဘဲဖြစ်ဖြစ်၊အဆုံးနားမှ ပါဝင်လာသာဘဲဖြစ်ဖြစ် အားလုံး မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအသစ်ကိုရောက်ရှိစေကြတဲ့ ၈၈ မျိုးဆက်တွေဘဲဖြစ်ပါတယ်။
မိမိအထက်မှာရေးသားအသိပေးခဲ့သလို ယနေ့ မြန်မာ့နိုင်ရေးအသစ်အခင်းအကျင်းမှာ တူရာ… တူရာစုကြတဲ့အပြင် တစ်ဦးခြင်းက မိမိနှစ်ခြိုက် အားကိုး လက်ခံသည့် နိုင်ငံရေးပါတီကိုဝင်ရောက်ဆောင်ရွက်နေကြပါပြီ။
စည်းလုံးညီညွတ်ကြဘို့ ယနေ့ကာလမှာရေးသား ပြောဆိုနေကြသူအားလုံးကို အလေးထား ကျေးဇူးတင်ရပါတယ်။
သို့ပါသောကြောင့် မိမိတို့ ၈၈ မျိုးဆက်အားလုံးသည် မိမိတို့ရောက်ရှိနေသည့် အခြေအနေ ဖြစ်စဉ် ကို ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် အခင်းအကျင်းများဖြစ်လာစေရန် ကြိုးပမ်း အားထုတ်ကြဘို့လိုအပ်ပါတယ်။
ဥပမာ ယနေ့ အာဏာရပါတီ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိနေကြသူ များက မီဒီယာ(media) မှာ ပြောဆိုနေကြတာတွေက သူတို့ပါတီ အောင်နိုင်ရေးအတွက် ပြောဆိညနေကြမူဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ ပါတီ၏ လုပ်ဆောင်ခဲ့မူ၊ရပ်တည်လာခဲ့မူ၊ ယနေ့လုပ်ဆောင်နိုင်မူကို ပြောဆိုဖြေ ကြားနေတာဖြစ်ပါတယ်။
ယနေ့အာဏာရ ပါတီ၌ ၈၈၈၈ အရေးတော်ပုံ ကြီးမှာ ပါဝင် လူပ်ရှား ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသူ ၈၈ မျိုးဆက်ဟူသည့် နိုင်ငံရေးအသစ် မျိုးဆက်များသည်လည်း အများအပြားပါဝင်ဆောင်ရွက်နေကြသည်ကိုတွေ့ရသလို…..
၈၈ မျိုးဆက်များမှ တူရာ တူရာ စုကြသော
နိုင်ငံရေးပါတီများကိုလည်းမြန်မာ့နိုင်ငံရေးအခင်း အကျင်း မှာတွေ့နေရပါတယ်။
အာဏာကို အတင်းအကြပ် တစ်ဦးတည်း တစ်စုတည်း၏ ချုပ်ကိုင်အုပ်ချုပ်သည့် အစဉ်အဆက် အာဏာရှင် များကို ပြုတ်ကျ
နိုင်စေ ပြီး ဒီမိုကရေစီဆိုသည့် ပြည်သူ လူထုကရွေးချယ်ခန့်ထားမှသာ နိုင်ငံကို အုပ်ချုပ်ရသော စနစ် သို့ မိမိတို့နိုင်ငံ ရောက်ရှိနေ
သို့ကြောင့်စဉ်ဆက် ကြာစွာ လူထုဆန္ဒဖြင့် လူထုကဆန္ဒမဲပေးရွေးချယ်မူနဲ့ တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအောင် ကြိုးစားခွင့်ရှိနေပါပြီ။
မိမိတို့တစ်ဦးခြင်းသည် ယနေ့အချိန်ကာလအထိ ဘာကိုရွေးချယ်ရမလဲ ?
ဘယ်ပါတီကို သာ အစိုးရ ဆက်ဖြစ်ခွင့် ပေးရမလဲ ?
အများစုကလည်း စဉ်းစား ဆုံးဖြတ်ပြီးနေသည့် အနေအထားကိုလည်း တွေ့ မြင် ကြားသိနေရပါတယ်။
သို့ပါ၍ မိမိတို့ ၈၈ မျိုးဆက်များသည်
ဝေဖန်ပြောဆို ရေးသားကြသည်ံအခါတွင် ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ပုတ်ခတ်မူများကို ရှောင်ဖယ်နိုင် ကြပါစေ။
အချက်အလက်များဖြင့် ခိုင်ခိုင်မာမာ မိမိတို့တိုင်းပြည်အတွက် ဝေဖန် ပြောဆို ရေးသားနိုင်ကြပါစေ။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက် ရိုင်းပျမူများ ကင်းကြပါစေ။
ယဉ်ကျေး ပျူ ငှာ မူများ လွမ်းခြုံ နိုင်ကြ
တွေးဆ ရေးသား ပြောဆိုမူများမှသည် မိမိတို့တိုင်းပြည်အတွက် လက်တွေ့ ကျသည့်
မူဝါဒ ကောင်းများ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။
ဟူ၍ ရေးသား တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။
အလေးထားစွာဖြင့်. ကိုသိန်းဌေး ၈၈ ပဲခူး။